“Waxaan Qorsheeyey in aan Islaamka Burburiyo, Balse Waan Muslimay,”Qiso! | Boorama Online Network
“Waxaan Qorsheeyey in aan Islaamka Burburiyo, Balse Waan Muslimay,”Qiso!
January 12, 2017 | Filed under: DHACDOOYIN & QORMOOYIN | Posted by: admin
Dunida waxa soo muslima dad aad u badan. Waxa keena in ay diina Islaamka qaataan baadhis badan oo ay sameeyaan, kuwo kale mucjisooyin ay kala kulmaan dhaqanno ay ku kacaan.
Haddaba, waxa aanu akhristayaashayada aanu jecelnahay luqadda Soomaaliga ugu tarjumnay qiso ku saabsan haweenay qorshaynaysay in ay kacdoon ku kiciso Islaamka, kana mid ahayd koox Maraykan ah oo dawladda la shaqeeya, laakiin diyaariya ajendayaal u gaar ah oo ay ku bartilmaameedsadaan muslimiinta iyo bulshada muslimku waxa ay u arkaan.
Qisadan oo lagu baahiyey mareeg la yidhaa Aboutislam.net waxa ay u dhacday sidan:
“Waxa aan sameeyey qorsheyaal; waxaan ka mid ahaa koox qorshe samaysa, Allena qorshihiisu leeyahay, Alle ayaa ah qorshe sameeyah ugu wanaagsan.
Markii aan ahaa dhallinyarada, waxa aan aad u soo jiitay koox dad ah oo ajendayaal khaldan watay. Waxay lahaayeen, welina leeyihiin urur ay isugu tageen shaqsiyaad guuldarraystay, kuwaasoo dawladda la shaqeeya, balse ajendayaal gaara hoosta ku wata oo ah in ay islaamka burburiyaan. Maaha koox dawladeed sida aan ka warqabo, waxay se isticmaalaan magac dawladnimo si ay ujeeddooyinkooda u dhaqaajiyaan.
Mid ka mid ah kooxdan ayaa ii yimi, waayo waxa uu arkay anigoo u doodaya, dhiirrigelinaaya, kana shaqaynaya xuquuqda haweenka. Waxa uu ii sheegay haddii aan oggolaado in aan xidhiidhka caalamiga ka barto Bariga Dhexe (Middle East) in uu shaqo iga siin doono Safaaradda Amerika ee Masar ku taal. Waxa uu iga rabay inaan halkaas tago si uu ii isticmaalo oo aan dawlad ahaan ula hadlo haweenka muslimiinta ah, kuna boorriyo in ay xuquuqdooda u doodaan, una dagaallamaan.
Waxa aan u arkayey in ay tahay aragti aad u wanaagsan. Waxaan TV-ga ka arkaa haweenka Muslimiinta; waan ogaa in ay sabool u badan yihiin, waxa aan damcay inaan ku hoggaamiyo iftiinka xorriyadda qarniga 20aad.
Hamigan dartii waxaan tegay Jaamcad si aan waxbarasho u bilaabo. Waxa aan bartay Quran, xadiis iyo taariikhda Islaamka (siirada). Sidoo kale, waxaan bartay habka aan u isticmaali lahaa macluumaadka aan helo. Waxa aan bartay si hadalka loo beddelo oo aan dadka uga dhaadhiciyo waxa aan doonayo in aan idhaahdo. Waxa ay ahayd hubayn aad u qiimo badan.
Markii aan bartay diinta islaamka iyo dhammaan shareecada ee aan si khaldan u isticmaalay muddooyinkii hore, aakhirkii waxa i galay dareen xiiso ah oo ii jiiday in aan hoos ugu dhaadhaco, dhadhamiyana macnaha dhabta ah ee dhuuxa islaamnimada ku jira. Macno ayey ii samaysay, cabsi badan baa I gashay, sidaa darteed si aan bal arrintan uga falceliyo, waxaan bilaabay inaan dhigto fasalo Kiristaanka la igu barayey.
Waxa aan doortay macallin (Professor) Jaamacadda ah, waliba karaamo aad u weyn loo qabay, isla markaana sita shahaadada ugu sarraysa ee Ph.D, gaar ahaan wuxuu Jaamacadda Harvard ee dalka Maraykanka ka dhammeeyey cilmiga barashada diimaha (Theology). Waxa markii ugu horraysay aan dareemay in aan gacan wanaagsan ku jiro.
Sidaan u malaynayey bay ahayd, balse way is beddeshay, sababtoo ah macallinka wax ii dhigayey wuxuu aaminsanaa xornimada amma in qof kasta uu raadsado waxa dhabta ah ee ku habboon (Unitarian Christian). Muu aaminsanayn sida Kiristaanka kale aaminsanaayeen ee ah in Nebbi Ciise yahay Ilaah amma sarreeye. Dhab ahaantii wuxuu aaminsanaa in Ciise yahay Nebi.
Waxa uu markiiba bilaabay inuu kitaabka baybalka si fiican ii baro, gaar ahaan inuu ii tuso mid luqadda Giriigga, Hebrew (Luqada Yuhuudda) iyo Amxaariga ku qoran, waxaannu i tusay sida loo bedbeddealy. Kadib, waxa uu I baray taariikhda Kiristaanku siday u qaabaysan tahay iyo dhalan-rogga ku dhacay.
Markii aan dhammaystay fasalkaas, waxa burburtay diintii aan haystay, balse wali diyaar umaan noqon in aan aqbalo Islaamka.
Waxa aan sii waday in aan naftayda wax u barto iyo noloshayda dambe. Waxa ay igu qaadatay safarkaas waxbarasho ee marxaladda isbedbeddel marayey muddo saddex sanno ah. Waxa aan su’aallo waydiiyey Muslimiinta oo aan waydiiyey waxyaabahay rumaysan yihiin. Mid ka mid ah dadkii aan su’aalaha waydiinayey waxa uu ahaa wiil ka tirsan Ururka Ardayda Muslimiinta ah oo la odhan jiray MSA (Muslim Student’s Association). Alle mahadii waxa uu markiiba arkay in aan diinta xiisaynayo, waxaannu ku dedaalay inuu Islaamka si fiican ii baro. Waxa uu fursad kasta oo uu helo ii soo bandhigi jiray Islaamka, isagoo macno iyo qancin saarayey doodiisa.
Walaalkaygii Muslimka ahaa ayaa habeen habeennada ka mid ah ila soo xidhiidhay, waxa uu iiga sheekeeyey koox Muslimiin ah oo soo booqda tuulada. Waxa uu iga codsaday inaan la kulmo. Waan ka aqbalay. Waxa aan u diyaar garoobay si aan ula kulmo cishaayiga kadib.
Waxa la iigu soo dhaweeyey qol ay joogeen 20 nin, kadib waxa la ii banneeyey meel aan fadhiisto, kadibna waxa aan si toos ah u wajahay nin wayeel ah oo Bakistaani ah.
Alle Mahadii wuxuu ahaa nin aad u aqoon badan oo diinta Kiristaankana aad u yaqaan. Aniga iyo isaguba waxaannu ka doodnay waxa ay ku kala duwan yihiin Qu’aranka iyo Bible ilaa intii salaadda subax laga gaadhayey. Doodayadu waxay ahayd mid cilmi ku dhisan oo la is qancinayey, markii aan in badan dhegaystay ninkan caqliga badan, waxa uu xataa ii sheegay waxyaabo badan oo aan fasalkii Kiristaanka ku qaatay, waxa uu iigu baaqay inaan Muslimo, taasoo aan cidi hore iigula soo dhiiran.
Muddo saddex sanno oo aan baadhitaan iyo cilmi-baadhis ku jiray cidi iigumay baaqin in aan Muslim noqdo. Waa la I caayey, la ila dooday, balse ma helin baaqan oo kale.
Waan fikiray, way I taabatay arrintiisaas, horena waan u soo dhawaaday oo fahan badan baan diinta ka qaatay, waxaanan xaqiiqsaday in ay tahay waqtigan kaan sugayey.
Waxa aan ogaa in ay tahay runtii aan doonayey, waxaanay noqotay in aan go’aan qaato. Alle mahadii, waxa furmay qalbigaygii iyo iimaankaygii, waxaanan idhi “Waayahay, waxaan doonayaa inaan Muslim noqdo.”
Waxa markiiba la ii qabtay Shahaadada oo aan Ingiriisi iyo Carabi labadaba ku dhawaaqay. Markii aan Ashahaatay, waxaan dareemay dareen aanan waligay arag. Waxa i fuulay culays jidh ahaaneed oo dhinaca laabta ah. Waxa igu adkaatay nefta sidii oo aan markii ugu horraysay adduunka korkiisa ku neefsaday.
“Alxamudulillah, Alle ayaa I siiyey nolol cusub, waan daahiray, fursad aan jannada uga faa’iidaystona waan helay, waxaanan u tukaday sidii oo aan noolaanayo inta noloshayda ka hadhay, Muslimnimana ku dhimanayo,” ayey ku soo gebagebaysay qisadeeda iyo siday u dhacday u digo rogashadeedii muslimnimo.